Motorola waxay soo saari doontaa afar taleefan oo casri ah Android One sannadkan | Androidsis
Motorola waa mid ka mid ah dhowr nooc oo ku yaal Android taas leedahay taleefan casri ah oo leh Android One oo ah nidaamka hawlgalka. Xaaladdaada waa tan Moto One, oo la soo bandhigay sannadkii hore oo laga bilaabay caalamka, sidoo kale Spain. In kasta oo ay shirkaddu durba ka shaqaynayso jiil cusub oo taleefanno ah oo adeegsan doona nuqulkan nidaamka hawlgalka.
Toddobaadyadan waxaan aragnay sida hore bay u daadanayeen ka faahfaahinta koowaad ee ku saabsan Motorola One Vision, kaas oo ah taleefankii ugu horreeyay ee la xaqiijiyo ee jiilkan cusub oo wata Android One.Laakiin waxaad moodaa in shirkaddu qorshaynayso inay soo saarto baaxad buuxda, sidii ay dhowaan ku samaysay badhtamihii Moto G7.
Android One waa nooc ka mid ah nidaamka hawlgalka in ayaa caan ka ah suuqa, gaar ahaan tan iyo 2017 waxay u muuqataa in arrimuhu si fiican ugu socdaan. Sanadkii la soo dhaafay qaar ka mid ah sumadaha ayaa la sameeyay gelitaankeeda qaybtan, Motorola oo ka mid ah. Dareenadu waxay ku fiicnaadeen shirkadda, ugu yaraan waxay umuuqataa, maxaa yeelay hadda waxay ku shaqeeyaan taleefanno badan.
Mid ka mid ah Android: Asalka iyo isbeddelka noocaan ah nidaamka qalliinka
Waqtigan xaadirka ah, dhammaan xanta aan maqalnay waxay tixraacaysaa Motorola One Vision. Inkastoo shirkadda Waxay nooga tagi doontaa taleefanno badan oo kala duwan, sida dhowr qof oo xog -ogaal ahi hore u tilmaameen. Mid ka mid ah, oo ahmiyad weyn leh, waa Evan Blass. Dillaaca caanka ah sida caadiga ah wuxuu bixiyaa macluumaad badan oo arrintan la xiriira. Sidaa darteed, in la xuso in ay jiraan taleefanno dhowr ah oo ku jira baaxaddan dhexdeeda waa wax maskaxda lagu hayo.
- Evan Blass (@evleaks) April 17, 2019
Si loo caddeeyo, waxaan filan karnaa afar taleefan oo isku mid ah. Markaa summaddu waxay raaci doontaa istiraatiijiyad la mid ah tii ay ku fuliyeen baaxaddooda Moto G7, oo sannadkan soo bandhigtay afar taleefan markii ugu horreysay. Dareenkan, magacyada noocyadan cusub ee astaanta ayaa noqon doona:
Tan saddexaad waxaan haynaa xog toddobaadyadan, sida xaqiiqda ah in waxay isticmaali lahayd processor Exynos. Inaad sidan noqoto mid ka mid ah taleefannada casriga ah ee ugu horreeya suuqa si aad u isticmaasho processor Samsung, aan ahayn astaanta lafteeda. Shaki la'aan, waa sharad dulsaarka dhinaca shirkadda. Laakiin taasi waxay yeelan kartaa waxqabad wanaagsan. Intaa waxaa sii dheer, waxay noo cadaynaysaa inay tahay moodel dhexdhexaad ah, maadaama processor-ka uu adeegsan doono uu noqon doono Exynos 9610, oo ah isla processor-ka aan ku haysanno Galaxy A50, oo ka mid ah calan-qaadyadii badhtamaha Samsung -soocid.
Telefoonnada kale ee ku jira inta u dhexeysa Motorola weli ma hayno xog. Ma jirin wax daadad ah oo iyaga ku dhacay illaa hadda, marka macno ahaan waa inaan sugno daadad cusub. Shirkadda lafteeda waxba kamay sheegin qorshayaasheeda ku aaddan arrintan. Ma garanayno goorta la sii deynayo taleefoonnadan. Midkoodna kuwa wax dillaacay ilaa hadda ma awoodin inay bixiyaan macluumaad ku saabsan faahfaahintaan. Marka waa inaan sugnaa xog cusub.
Laakiin way cadahay in Motorola uu ku sii jeedo baandada Android One, iyada oo wadar ahaan afar casri ah oo cusub. Sidan, dhex-dhexaadkeedu wuxuu noqon doonaa mid aad u dhammaystiran, isagoo isu soo bandhigaya mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee arrintan ku saabsan Android maanta. Gaar ahaan maadaama Android One uu yahay nooc ay macaamiishu jecel yihiin, marka la eego maqnaanshaha bloatware ee taleefannada, kaasoo hubiya khibrad isticmaale oo wanaagsan mar walba. Taasi waa sababta aan u aragno sida iibkoodu u kordho.
In kasta oo tartanka qaybtan sidoo kale uu yahay mid la xusi karo. Nokia waxay horey u isticmaashay Android One dhammaan taleefannadeeda, sidoo kale ma iloobi karno Xiaomi, oo leh laba fac iyo saddex meelood meel ayaa hadda socda. Markaa waxay noqon doontaa lama huraan in la arko haddii Motorola ay maamusho inay dalool ka samayso qaybtan suuqa, oo ballanqaadaysa inay nooga tegayso taleefanno aad u danaynaya bilaha soo socda. Sideed u aragtaa qorshayaasha shirkadda?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Motorola si ay u daahfuraan dhowr taleefano oo ay la socoto Android One dhowaan